Malamaaltummaa Dura Dhaabbachuun Akka Addunyaatti Godhamu Itti Fufeera
Gochii malaamaltummaa wal amantaa dhabamsisuun misooma qancarsee amantaa dhaabbattoota Demookraasii irra jiru hanqiisuun sochii yakkaa biyyoota gidduuf karaa saaqa.Guddiina dinagdee ittisuun dorgommii jireen jeeqa.Kana malees daldala gaggeessuuf baasii dabalataa gaafata.
Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti malaamaltummaan sadarkaa addunyaatti oomiisha waliigalaa hanga harka 5ni nyaatee jira.Malaamaltummaan waan sadarkaa addunyaatti guutummaa addunyaa keessatti gaggeeffamuu dha.
Kunis gocha toora qabeenya dhunfaanis ta’e kan uummataan, biyya sooreessaa fi iyyeessa hundumaa keessatti gaggeeffama.Dhuma irratti garu waan malaamaltummaan fideen kan rakkatuu uummata.Kaanaafis fakkeenya kan ta’u Gatiin waan hundaa dabaluu, tajaajiila hawaasaaf qabeenyaa ramadamuu xiqqaachuu, haallii hojiin keessatti gaggeeffamuu mijataa ta’u dhabuu, faalama qilleensaa, bishaanii fi tajaaiillii eleektrikaa hanqachuu, hokkarri humnaan gaggeeffamuu jiraachuu, dawaan fayyaaf hin taanee jiraachuu, seeraan ala bosoona ciruu fi albuudaa baasuun malaamaltummaa irraa madduun uummata miidhu.Keessumaa malaamaltummaan hiyeeyyii fi dubartoota akkaan miidha.
Baatii Waxabajjii gara jalqabaa irratti Tokkummaan mootummootaa walgahii addaa kan gumii walii galaa waameee ture.Kunis duula malaamaltummaa irratti gaggeeffamuu jabeessuun,tarkanfii malaamaltummaa ittisan faana bu’an, seera duratti dhiyeessuun adabuuf walta’iinsa addunyaa jabeessuu kan ajedhu ture.
Murtii gumii walii galaa kan Tokkummaa mootummootaa 73/191 kan baatii Muddee bara 2018 irra ka’ameen, gaafa Waxabajjii 2 biyyonni miseeensoota ta’anlabsii siyaasaa kan tarkaanfii fudhatamuu qabu agarsiisuu raggaasiisan.Kunis gara fuula duraatti maaltu ta’u akka qabu lafa kaa’ee jira.
Galmeen kunis, mata duree isaa, “waadaa walii keenyaa kan rakkoo mudatan haala qubsaa ta’eeen ilaaluun malaamaltummaa ittisuu akkasumas dhaabuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban jedha.
KunisMalaamalrummaan kan ilaaleen bara 2003 seera Tokkummaan mootummootaa baasee bu’uura godhachuun, sadarkaa addunyaatti malaamaltummaa dhabamsissuuf walii galtee tolfamee dha. Adunyaan har’a malaamaltummaa ittisuuf akkasumas guutummaatti dhaabuuf yaalii walii wajjiin gochuun isaaniif kun qabxii tokko jechuun Tokkummaan Mootummootaatti Ambaasaaddarri Amerikaa Lindaa Toomaas Griinfiild ibsanii jiru.
Caasaa sadarkaa addunyaa kan farra malaamaltummaa ta’e bifa haaraan ijaaruu fi qabaachuu akkaan barbaachiisaa ta’u Amerikaan ni amanti.Labsiin siyaasaa ammaa kun caasaa haaraa ijaaruu tarkaanfii jalqabaa fi barbaachisaa dha.Tarkaanfiin malaamaltummaa irratti fudhatamu biyya kamiin iyyu kan dirqama irraa eegamuu keessumattuu, kanneen labsii Tokkummaan mootummootaa malaamatummaa faccisuuf baasee hojii irra oolchuuf dirqamnii irra jiru mara ilaallata jedhan Griin Fiild.
Amma hunda keenyaaf rakkoo kan ta’u waadaa seennee kana hojii irra oolchuu fi qabatamaan agarsiisuu dha.Labsiin kun caasaa farra malaamaltummaa jiru irratti kan hundaa’ee dha. Ilaalchii duraa maaliif kennamuu akka qabuus sirritti agarsiisa jedhan Ambaasaaddar Griin Fiild.
Hundii keenya jabinaa fi dadhabbii qabnu akka amannu gochuun dirqamaa fi waadaa akka seera jiruutti akka fudhannuuf nu dirqiisiia jedhan jechuun gulaalaan har’a yaada isaa xumuree jira.